Qeybta 1: arrimaha guud ee ku saabsan xogta ka HTC gudbaayo BlackBerry.
Qaybta 2. hab Free: Sida loo xogta ka HTC wareejiyo Blackberry
Qaybta 3. Waa kuwee qalabka BlackBerry ayaad isticmaashaa?
Ma doonaysaa si ay u gudbiyaan xogta telefoonka aad ka HTC in BlackBerry? Waa mid ka mid ah dhibaatooyinka daran ee soo food saaray dadka isticmaala telefoonada HTC, xogta wareejinta ayaa noqday caqabad ah, laakiin waxaa jira xal wax walba. In this article, waxaan ku baran doonaa oo ku saabsan arrimaha guud iyo siyaabo xogta ka HTC wareejiyo Blackberry. Bal aan marka hore la ogaado arrimaha ku saabsan in dadka isticmaala ay wajihi halka wareejinta ay xogta:
Samaynta kala iibsiga Bluetooth ah suurtagal ma ahan, oo waxaa jira arrimo halka wareejinta xogta laga telefoonka HTC in BlackBerry.
Samaynta wareejinta xogta noqonayaa caqabad ah u isticmaala oo ay aad u kala iibsiga ah barnaamijyada dhinac saddexaad waxaa looga baahan yahay iyo jeer qayb ka mid ah macluumaadka waxaa loo wareejiyey taasoo keentay in khasaare ah xog muhiim ah.
Dhibaatada caadi food saaray dadka isticmaala waa inaanay karaa wareejinta xogta tooska ah si toos ah oo u baahan barnaamijka dhinac saddexaad si ay u kala iibsiga xogta ah.
Kala beddelashada wareejinta xogta ka HTC in Blackberry oo bilaash ah waa hab laba tallaabo ah meesha aad ayaa looga baahan yahay in:
Dhoofinta xogta ka phone HTC si aad u computer. Si aad u dhoofiyaan xogta si aad u computer si fudud ku xidhi telefoonka HTC la your computer la cable USB, sanduuq wada hadal cusub ka muuqan doontaa, waxa la furo ka dibna nuqul oo paste xogta aad ku gal gaar ah oo cusub.
Dejinta xogta ka PC in aad telefoon cusub BlackBerry. Si aad u dajiyaan xogta soo guuriyeen, xirmaan telefoonka aad Blackberry in computer iyo sanduuq wada hadal cusub muuqan doonaa shaashadda oo dooro fursadaha kala iibsiga file. On your computer, furo Software BlackBerry Desktop oo guji ikhtiyaarka warbaahinta kala iibsiga ku habboon waxa aad doonayso in aad qabato.
Wondershare MobileTrans waa barnaamij one stop isticmaalaya in aad si fudud ku wareejin karaa xogta adiga oo aan wax khasaare ah. Waxaad si fudud nuqul karaa Xiriirada, SMS, iyo sawiro aan wax khasaara. Kaliya ma xiriirada kala iibsiga, laakiin waxa kale oo aad nuqul ka kartaa fariimaha qoraalka ah, wac gasho, photos, music, videos iyo barnaamijyadooda android u dhexeeya qalabka iyadoo hal click.
Taageerada ilaa 3000+ Popular Qalabka & OS ugu dambeeyey
Waxaa si fiican u la shaqeysaa Apple, Samsung, Nokia, HTC, LG, Sony, Google, Huawei, Motorola, ZTE, oo lagu daydo mobile ka badan.
Waxay bixisaa waayo-aragnimo aan xuduud lahayn eegin Sidayaasha gacanta ku. Xogta Support kala iibsiga ka telefoonada qandaraas ma-heshiis taleefannada gacanta.
Users kartaan si fudud gurmad ka Phone ee Old in PC iyo Soo Celinta in Mid ka mid ah New ka Later.
Users in Phone kasta wareejin karaan Lugood / iCloud. Ma heeso kala iibsiga kaliya oo playlists users sidoo kale dib u soo ceshano karaa Lugood / iCloud / Kies / kaabta BlackBerry iyo xiriirada kala iibsiga, sawiro, video, fariimaha qoraalka ah, iwm si ay wax qalab mobile taageeray.
Smartphone A waa hadal ah oo had iyo jeer soo noqnoqod loo isticmaalo telefoonada BlackBerry. Telefoonada Blackberry waxaa mar kasta lagu yaqaan oo bixiya adeegyada email iyo fariimaha degdeg ah in dadka isticmaala ay. Telefoonada Blackberry la teebabka QWERTY sameeyey iyaga si gaar ah oo caan ah oo si weyn u isticmaala adduunka oo dhan. Halkan waxaa ku qoran liis ah ee ugu fiican telefoonada BlackBerry heli karaa USA:
Blackberry Z10 waa qalab ku kalifay BlackBerry leh nidaam adag oo cusub hawlgalka. Muuqaalada ay ka mid Touchscreen, Camera Front-jeeda, High-Resolution Camera, HD Video Rikoodh, External Kaydinta, iwm
Burcad version OS: BlackBerry 10
Release Price: $ 199
Faa'iido: design wanaagsan-raadinta, nidaamka qalliinka ku ool ah, iyo qaab wanaagsan.
Qasaarooyinka: Baahida codsiyada ka badan.
Blackberry Q10 qoreysa camera screen Touch, Front jeeda, keyboard Physical, External Kaydinta, camera-sare Resolution, HD Video duubo iyo 4G.
Release Price: $ 630
Faa'iido: design Compact, keyboard raaxo leh, Easy & Fariin Quick.
Qasaarooyinka: Screen yaryar.
Blackberry Classic waa wanaagsan ee loo yaqaan ay nolosha batari fiican, oo ay rada cajiib ah ka dhigaysa Blackberry cusub ee la doortay ay si sahlan dadka isticmaala ay.
Qiimaha Release $449.99
Faa'iido: saarka Tayada Wanaagsan, keyboard, iyo trackpad waa aqbasho.
Qasaarooyinka: Qaar ka mid ah barnaamijyadooda Android la la'yahay.
Blackberry ayaa Passport waa phone fantastik ah leh shaashad qaab square iyo keyboard fiican. Waxa ugu fiican waa loo furo barasantigareeyaan oo ka shaqeeya telefoonka.
Release Price: $ 249
Faa'iido: bandhigay fiican Square dokumentiga la daawado.
Qasaarooyinka ma jiro,
Z30 Blackberry ayaa bixiyaan nolol batari dheer oo soo saarey la adag hagaajinta nidaamka qalliinka. Muuqaalada ay ka mid Touchscreen, camera Front-jeeda, kaydinta dibadda, camera High-xallinta, HD video duubo, iyo 4G.
Operating system: OS BlackBerry
OS version Launch: 10.2
Faa'iido: nolosha batari Long iyo adag dhisayo.
Qasaarooyinka: xulashada App dambaysaa Android iyo macruufka
6. BlackBerry baxdaa
The boodda oo cusub BlackBerry waa telefoon lagula talinayaa in ay screen firfircoon oo sare oo tayo fiican u socoto xaaladdaada.
Qiimaha ORelease $274.99
Faa'iido: screen koraya, nolosha batari fiican.
Qasaarooyinka: halganka Camera in low-Nuur iyo habeenkii.
Blackberry Porsche Design uu leeyahay (Satin kiiska ahama steel gacan-dhigay maqaar Talyaani dib) bannaanka u qurux badan. Model Taas waxay keenaysaa 1.5GHz processor dual-asaasiga ah, 64 GB ee xasuusta kaydinta, camera 8-megapixel ah, 2GB ee RAM, iyo qaab 4.2-inji oo la 1280 x 768 xallinta iyo cufnaanta pixel ee 356ppi ah.
Faa'iido: Battery ilaa sagaal saacadood (ama 540 daqiiqo) waqti hadal.
Qasaarooyinka: Limited Details
8. Blackberry ayaa 9720
Blackberry ayaa 9720 waa phone BB leh dhowr ah oo ay ka mid ah BBM button kooxda heegan u helaan si degdeg ah u wada hadalka oo dhan ah. Qaabkan taageertaa camera ah 5-megapixel la flash LED iyo keyboard ah QWERTY hoos ku qoran ay guddi furayaasha gaar ah.
Faa'iido: Fariin Easy
Z3 BlackBerry waa Blackberry ayaa isku dayaysa in ay dadka isticmaala ay nadaam touchscreen buuxa. Z3 waxay bixisaa dhowr ah muuqaalada saxiixa garab Screen Reader BB iyo weyneeyo Apps isticmaalayaasha la aragtida dadka saboolka ah.
Faa'iido: akhriska Hagaajiyey ee shaashadda.
Qasaarooyinka: barnaamijyadooda yar
Q5 10. BlackBerry
Q5 Blackberry ayaa kulan fasalka iPhone leh 720 x 720 ay bandhigay. Its ah dual-asaasiga ah 2.4 Ghz Snapdragon S4 processor iyo bixiyaa waqti hadal cajiib ah 750 daqiiqo. Waxa ay taageertaa 5-megapixel camera weyn (la gashto 4-element).
Faa'iido: Battery Life
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga HTC in BlackBerry